Mandeha tsy misy ilana azy i Munich satria miakatra manerana an'i Alemana ny mari-pana
Home » Toerana fitsangatsanganana » Mandeha tsy misy ilana azy i Munich satria miakatra manerana an'i Alemana ny mari-pana
Nirohotra nankany amin'ny farihy sy ny dobo ny Alemanina mba hangatsiaka rehefa miaina onjam-panafana ny firenena. Andiana vehivavy nilentika teo amoron'ny reniranon'i Isar ao Munich ny faran'ny herinandro teo no nasaina nanarona ny mpiambina.
Nasaina nanarona ny tratrany tany Munich ireo vehivavy sunbathers tsy misy loha, ka nahatezitra ny vehivavy hafa izay avy eo nikapoka ny tampon'ny bikini azy ireo ho firaisankina. Ady hevitra ankehitriny no iadian-kevitra amin'ny antoko politika ao amin'ny filankevitry ny tanàna.
Na izany aza, tezitra ny sunbathers hafa noho ny famonoana ary naka ny tampony bikini manokana ho firaisankina izy ireo, hoy ny tatitra nataon'i Süddeutsche Zeitung. Niantso ny polisy avy eo ny mpiambina, izay nilaza tamin'ny vehivavy fa mila manarona izy ireo.
Ny antoko Green dia nitondra ny raharaha tany amin'ny filankevitry ny tanànan'ny Munich mba hiadian-kevitra. "Tsy takatra raha ny lehilahy afaka mandainga amin'ny masoandro nefa tsy misy vehivavy," hoy i Dominik Krause an'ny Maitso.
Nankany amin'ny lafiny hafa ny Vondron-tsosialy Christian (CSU) ary nanolotra fihetsiketsehana maika ny Alarobia miantso ny fanitsiana ny lalàna momba ny akanjo fidiovana any Munich “noho ny fitafiana fandroana tsy maintsy manarona tanteraka” ny tratra sy ny taovam-pananahana.
Alemana dia mamela ny fitanjahana fa amin'ny faritra voatondro ihany, izay misy enina ao Munich. Ny lalàna momba ny filomanosana mitanjaka dia mihatra amin'ny tanàna sisa ary milaza fa ny olona dia tsy maintsy manao akanjo lava.
Nitaraina tao an-toerana ny mponina tao an-toerana fa nihevitra izy ireo fa “niaritra fandeferana” i Munich ary gaga tamin'ny vehivavy nasaina nanarona azy ireo.